China Zinc pyrithione soplaya na china na ụlọ ọrụ CAS 13463-41-7 na ndị na-emepụta ihe | Guanlang
Zinc Pyrithione Detergent Raw Materials Hair Care Chemicals Zinc Pyrithione ZPT ntụ ntụ na-emepụta supplier na china
anyị bụ otu n'ime ndị na-eweta Zinc Pyrithione na China, anyị na-emepụta Zinc Pyrithion na teknụzụ ọhụrụ yana ọnụahịa asọmpi.
Aha ngwaahịa Pyrithion Zinc
Usoro ihe omimi C10H8N2O2S2Zn
Ibu arọ molekụla 317.7217
Ebe esi nri 253.8°C na 760 mmHg
Aha ọzọ: ZPT
Ebe ọ bụ na 2007, anyị bụ otu n'ime ndị na-eduga Ndị na-eweta Zinc pyrithione emepụta factory na china, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta Zinc pyrithion, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ọnụahịa asọmpi na ihe nlele efu.
Kedu ihe bụ Zinc pyrithione?
ZPT(Zinc pyrithione) kacha mara amara maka iji ya na-agwọ dandruff na seborrheic dermatitis. Ọ nwekwara ihe ndị na-egbu egbu ma na-adị irè megide ọtụtụ nje na-akpata site na streptococcus na staphylococcus klas. Ngwa ahụike ya ndị ọzọ gụnyere ọgwụgwọ psoriasis, eczema, ringworm, ero, ndị na-eme egwuregwu ụkwụ, akpụkpọ akọrọ, atopic dermatitis, tinea, na vitiligo.
A kwadoro Zinc pyrithion maka iji ọgwụ eme ihe na United States dịka ọgwụgwọ maka dandruff. Ọ bụ ihe na-arụ ọrụ n'ọtụtụ shampoos na-egbochi ọfụfụ dịka isi & ubu. Agbanyeghị, n'ụdị nrụpụta ya na ike ya, ọ nwere ike ịdị njọ site na kọntaktị ma ọ bụ iri nri
Aha: Zinc pyrithioneZPT)
Nọmba CAS: 13463-41-7
Ọdịnaya: ≥ 98%
Ebe mgbaze: ≥ 240 ℃
Oke urughuru D50: ≤ 5 μM D90：≤10μm
ngwugwu: 25kg kaadiboodu drum
Zinc pyrithion ntụ ntụnwere mmetụta antibacterial na mgbochi fungal ma na-arụ ọrụ nke ọma megide ọtụtụ nje. Enwere ike iji ya dị ka ihe nchekwa na usoro-tions, ma enwere ike itinye ya n'ime usoro nlekọta ntutu isi dị ka onye na-edozi ntutu isi nke nwere ike ime ka ọdịdị ntutu dịkwuo mma yana igbochi na ịgwọ dandruff.
Ụgbọ njem: Zere ihu ihu, ìhè anyanwụ, mmiri na okuku, zere imebi ngwugwu ahụ.
Nchekwa: Ekwesịrị ịchekwa ya na ebe dị jụụ, kpọrọ nkụ na ikuku, oge echekwara agaghị agafe afọ 2.
Nke gara aga: Ọkwa ịchọ mma GSH l-Glutathione/ lglutathione ntụ ntụ belatara maka ọcha akpụkpọ anụ glutathione ntụ ntụ na-eweta na china
Osote: kristal mannitol emeputa soplaya Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd.
zụta Zinc pyrithion
ere Zinc pyrithion
Zinc pyrithion emeputa
Zinc pyrithion ntụ ntụ
Zinc pyrithione soplaya
Ndị na-eweta Zinc pyrithione
Ọkwa ịchọ mma GSH l-Glutathione/ lglutathione ...
NMN / β-Nicotinamide mononucleotide soplaya na ...
Ndị na-eweta China Glidant Talc na-emepụta na c ...
Ihe na-eme emulsifier Btms 50 Behentrimonium ...